Fanaan Oromo ah oo xalay lagu toogtay caasimada Addis Ababa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Fanaan Oromo ah oo xalay lagu toogtay caasimada Addis Ababa
Fanaan Oromo ah oo xalay lagu toogtay caasimada Addis Ababa
Fanaankan ayaa wuxu ahaa mid aay heesihi siyaasad u badnadayen oo kacdoonki isbeddelka keenay. Wuxuna xagjir ku yahay necebka boqortoyadi hore Axmarada sida boqorka Minilik waraysi u maalin dhaweed la yeeshay TVga OMN ayu sixun u aflagadeyay boqor Minilik asago dameer ayuu addis ku soo galay ee faraska taaladisa anga Oromo ayaa iskalahayn, sidad ogtihin qolyahan reer Minilik oo ayaguna xagjir ah ayay arintan cadho ku beertay balse sidi lagu yaqaanay mayn iswaalwalin.
Waxaa naftisa halis galiyay qiyaasti sida la sheegayo, horay wuxu heesay labo hees oo leh midi ” Anigu xaggen jooga…” Nacam maba noolin oo kale waa ti kacdoonka ki kicisay midna marku isbeddelku dhawa ayuu yidhi “jiraa” wan joogna nacam wan noolnahay oo badbaadnay, heesta cusub u soo waday oo TVga OMN ka sheegay todobadki heestas oo leh ” Raggi Xaggu Jooga” ama “Idinme” oo kacdoon cusub logu talagay.
Madamo RW Abiy ahmed laftigisa aay jiran kuwa xagjir ku ah qadiyada Oromo oo ku eedaynaya inu isbeddelka leexsaday oo qolyaha boqor Minilik gacanta u galay ama inusan Oromo ba ahayn iyo cadho ka kacday dib u dhigida doorashada.
Dilkan ayaa naxdin weyn ku beeray shacabka itoobiya gaar ahan ummada Oromo muxaafad iyo mucaarad ba waxana la ugadhsanaya cidi ka danbeysay dilkan.
Waa dil shirqoolaysan si layskaga horkeeno qowmiyada Oromada iyo Axmarada waxayna u badan inay qolyo wadanka inay qalaalase ka abuuran raba dalkan aay fuliyen.
Previous articleMadaxwayne Muuse Biisi Oo La Kulmay Dr Cali Khaliif Galaydh.
Next articleIiraan oo weydiisatay Interpol inay gacan ka geysato soo qabashada Trump
Turkiga oo caawinimo soo gaadhsiiyey Dawlad deegaanka soomalida